Unokulindela ukubona amaBuddha kunye ne- bodhisattvas enobubele kwi-bdhistist yobugcisa beetempile. Kodwa ziphi izinto ezinkulu, eziyikrakra ezilinda umnyango?
© Ed Norton / Getty Izithombe
Ngokwesiko, iithempelesi zeBuddha zilondolozwe yinto edla ngokuyikrakra izidalwa zamathambo, abaninzi abantu baseAsia. Nantsi isikhokelo esikhombisekileyo kumgcini weetempile oqhelekileyo.
Garuda: Icandelo leNyoni, iNxalenye yoMntu
© Design Pics / Ray Laskowitz / Getty Izithombe
I-original yeGaruda yayingumlingisi ovela kwiintsomi zamaHindu ebalwe ibali kwiNgqungquthela yamaHindu i -Mahabharata. NgobuBuddha, ke, i-garudas ifana neentlobo zeengqungquthela kunomntu omnye. Ngokuqhelekileyo, i-garudas inee-torsos zabantu, iingalo kunye nemilenze kodwa iintloko ezinjengentaka, amaphiko kunye neetalons. I-Garudas inkulu kwaye inamandla kodwa inomusa. Banobukrakra abachasene nabenzi bokubi.
I-Garudas inomdla ode kunye ne- nagas , isidalwa esinjengeenyoka esikhusela iintempile.
© John W Banagan / Getty Izithombe
Nantsi enye imbonakalo yegaruda, ekhangisa itempile eThailand. EThailand nakwezinye iindawo, i-garudas igcina izakhiwo zikaRhulumente ezibalulekileyo. I-Garuda yimiqondiso yesizwe yaseThailand nase-Indonesia.
Kwiindawo ezininzi zase-Asia i-garudas zinentloko zeentaka kunye nemifomo, kodwa emva kobugcisa bamaHindu, nakwiNepal, baba njengabantu abanamaphiko.
NjengoGrauda, ​​i-nagas nayo yavela kwiintsomi zamaHindu. I-naga yasekuqaleni yobugcisa bamaHindu yayingabantu ukusuka kwinqeni kunye nenyoka ukusuka okhalweni. Ngokuhamba kwesikhathi baba yinyoka. Bathanda kakhulu ukuhlala emzimbeni wamanzi.
EMpuma ye-Asia, i-naga ithathwa njengoluhlobo lwenyoka . KwiTibet nakwezinye iindawo zaseAsia, ke, inja kunye nodrako zizidalwa ezimbini ezahlukeneyo. Maxa wambi i-nagas ibonakaliswa njengeemvumba ezingenamthetho; maxa wambi bafana nemigodi enkulu.
Kwimbali yeBuddhist, i-nagas iyaziwa ngokukhusela izibhalo. Zizidalwa zehlabathi ezinokusasaza izifo kwaye zibangele intlekele ukuba zithukuthele, nangona kunjalo.
UBuddha kunye neNkosana yamaNaga
© Imagebook / Theekshana Kumara / Getty Izithombe
Lo mfanekiso uthathwe kwiNagadeepa Purana Viharaya, itempile yakudala yaseBuddhist eSri Lanka , ichaza i-naga njenge-cobra eneentloko ezininzi ezikhusela isibalo seBuddha. Ngokomxholo, uBuddha wa tyelela le tempile emva kokukhanyiselwa kwakhe ukuxazulula ingxabano phakathi kookumkani ababini baseNaga. Ookumkani baseNaga babekade belandela abakhuseli abazinikelayo be-dharma.
Guardian Lions NgeMagical Power
© Peter Stuckings / Getty Izithombe
Iingonyama, okanye iilwanyana ezinjengengonyama, ziphakathi kwezona zinto zidala kunye nezona zixhaphakileyo zethempeli. Iingonyama ziye zavela kubugcisa beetempile zaseBuddh ekuqaleni kuka-208 BCE.
Iingonyama ezibizwa nge- shishi eChina naseJapan-zicingelwa ukuba zinamandla omlingo wokukhusela imimoya emibi. Zihlala zifumaneka kwimifanekiso kunye nepeyinti kuyo yonke itempile kunye neendawo eziphambi kwendlu. UShiishe wayilondoloza iindonga zobukhosi kunye nezinye izakhiwo ezibalulekileyo ngokunjalo.
Ngesandleni sokunene sesithombeni kuyisimboli se-Ashoka enqwelwe yiingonyama ezine, umqondiso we- Emperor Ashoka Omkhulu (304-232 BCE). UAshoka wayengumcebisi omkhulu weBuddhism.
© Richard Cummins / Getty Izithombe
Uninzi lwabalondolozi betempile lwaseBuddha luyethusa okanye lugxeke, kodwa kungabi nats. Uza kubona ezi ntlanzi ezintle, ezenziwe ngumoya kwiimpile zamaBuddha eBurma (eMyanmar).
AmaNats yimimoya evela kwiminyaka yakudala yaseBurma inkolelo yenkohlakalo ngaphambi kokuthandana nobuBuddha. UKumkani uAnawratha (1014-1077), wayebhekwa njengoyise wesizwe saseBurma, wenza iTheravada Buddhism inkolo kaRhulumente. Kodwa abantu benqaba ukuyeka inkolelo yabo kwintlanzi, kwaye ngoko uKumkani wazibandakanya kubo eBurmese Buddhism kunokuba baxoxisane ngazo. Wabiza ama-37 "amahle" ayenayo, owamiselwa nguKumkani, ayebathandekayo amaBuddha kunye nabakhuseli beBuddhism. Imifanekiso emihle yeentlanzi ezizithobayo inokufumaneka kwi-sutras kunye neetempile.
Funda ngakumbi: UbuBuddha eBurma
U-Nat eSchwedagon Pagoda
© Jim Holmes / Design Pics / Getty Izithombe
Esi sibini eS Shwedagon Pagoda zihlamba i-nat. Kukholelwa ukuba ukuhlawulela iinkuni kunokuzisa inzuzo enhle. Kodwa awufuni ukubacaphuka.
© Will Robb / Getty Izithombe
Ikakhulukazi eMpuma ye-Asia, amanani amabini, ama-muscular figures ahlala ecala kwicala leetempile. Nangona bebukeka bekrakra, babizwa ngokuba yiiKumkani eziNcedo. Zicingelwa ukuba zivela kwi-bodhisattva egama linguVajrapani. Le bodhisattva imele amandla eBuddha.
Ookumkani abane baseZulwini
© Wibowo Rusli / Getty Izithombe
EMpuma ye-Asia, ngakumbi eChina naseJapan, iitempile ezininzi zilondolozwe yiKumkani eZulwini zaseZulwini. Laba bafana balwa namagorha abagcina iindlela ezine-ngasentla, ngasentla, empuma, nasentshonalanga. Bawususa imimoya emibi. Umfanekiso omi e- Todai-ji , itempile eNara, eJapane, ubizwa ngokuba yi-Komokuten ngesiJapane, okanye iVirupaksha kwisiSanskrit. Ungukumkani waseNtshona. Ubona kwaye ujezisa ububi kwaye ukhuthaza ukukhanya. Kwiindawo zaseAsia, uKumkani waseNtshona ubuye inkosi yenagas .
I-Yaksha: I-Benevolent Nature Spirits
© Matteo Colombo / Getty Izithombe
Umntu othandekayo ngumzekelo we-Yaksha, ngamanye amaxesha upela uYaksa okanye i-Yakkha. Nangona ubukeka bakhe obukrakra, utyholwa ngokunyamekela izinto ezixabisekileyo. Kule meko, ulinda itempile eThailand.
I-Yaksha ayisoloko ilinikwa ubuso beedemon; zinokuba zihle kakhulu, nazo. Kukho umgcini we-Yaksha kodwa ububi no-Yaksha obamkela indawo zasendle kunye nokutya abahambi.
I-Wall Wall ukuya kwi-Stop Ghosts
© De Agostini / Archivio J. Lange / Getty Izithombe
Ayikho itempile yonke inodonga lwesigane, kodwa luzuko oluphezulu kwabo benzayo. Iitempile ezininzi zinomfanekiso wesikrini, obizwa ngokuba ngumfanekiso wesithunzi, obekwe ngqo phambi. Oku kuthethiwa ukuyeka izigwili ezingendawo kunye nemimoya emibi, okubonakala ukuba ibhalwe ngamacangca.
Udonga lwegorha luhlobo oluphezulu kakhulu lwemeko yesitrini esichaza ukuxhaswa komlawuli.
Funda ngakumbi: Dragons!
Ijoka! Utywala lweManzi
© Santi Rodriguez / Getty Izithombe
Iidrabhu zesiko laseAsia akuzona ezilwanyana ezinqabileyo zemafilimu asempuma. Iidragon zimela amandla, ubuqili, ubulumko, kunye nenzuzo. Amathempeli amaninzi aseBuddhist ahlala ngokukhululekile kunye neenkonkxa ezibheke kwiiplanga kwaye zihlobisa izindonga. Le njoka yaseJapan iphinda isebenze njengamanzi.
Bangaphi abakhethiweyo abachaphazelekayo kwilizwe ngalinye?
Cómo puede ajustar estatus para la green card el esposo de ciudadano
Iintlobo ezahlukeneyo zokuSamphula kwiiNkcubeko kunye nendlela yokuzisebenzisa
I-Federal States yaseJamani kunye neSizwe ngoLwimi lwaseJamani